Xaalki Dhuusamareeb oo warar kasoo kordhay (warbixin)
Friday February 28, 2020 - 23:21:38 in Wararka by Xarunta Dhexe
aalada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa degen caawa kadib markii maanta uu ku dhex maray iskahorimaad hubeysan ciiidamada dowlada federalka ay geysay Dhuusamareeb iyo ciidamada Ahlu Sunna.
Inkastoo ay degen tahay xaalada magaalada hadana waxaa wararka ay sheegayaan in la maqlayo rasaas teel teel ah. Ganacsiga magaalada ee wadooyinka waaweyn ayaa intabadan xiran iyadoo laga cabsi qabo in markale uu dagaal ka dhex qarxo labada dhinac.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarado sida ciidamo horleh maanta ay gaareen magaalada Dhuusamareeb iyadoo ciidamadaa ay dowlada federalka geysay.
Waxaa sidoo kale gurmad u imanaya ciidamada Ahlu Sunna kuwaasoo ka imanaya deegaanada baadiyaha ee gobolka Galgaduud,hase yeeshee waxaa aad u adag in ciidamo ay iska soo galaan magaalada iyadoo fariisimo badan ay ka sameysteen ciidamada dowlada wadooyinka laga soo galo magaalada.
Waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisada iyadoo iskahorimaadka maanta dhacay ay ku dhinteen dad gaaraya toban ruux halka labaatan kalana ay ku dhaawacmeen.
Maamulka Ahlu Sunna ayaa ku eedeeyay dowlada inay ka dambeysay iskahorimaadka halka maamulka Galmudug ee madaxda uu ka yahay Axmed Qoorqoor uu ku eedeeyay Ahlu Sunna inay ka dambeyso dagaalka
Qaraxi Muqdisho oo warar dheeraad ah kasoo baxeen
25/11/2021 - 20:12:44